Iindaba - Ukuqala kokufakwa kunye nokugcinwa kwesiqhelo
Ukufakwa kokuqalisa kunye nokugcinwa kwesiqhelo
Ukufakwa kwendlela: qala ngokucoceka izixhobo zangaphandle nangaphandle zepetroli. Emva kokucoca, khangela ukuba i drive iyaguquguquka; xa ufaka, faka igrrafite grease phakathi kwamacwecwe okuxubana e-clutch ye-clutch, kwaye ufake ioyile ye-organic kwinxalenye yentambo i-starter ifakwe kwi-injini, kwaye umgama phakathi kobuso bokugqibela bezixhobo zokuqhuba kunye nenqwelomoya ye-flywheel yi-3 5 mm kufanelekile ukuqinisekisa ukuba iigears mesh ngokuchanekileyo
Ukulungiswa kwendlela: Ngexesha lenkqubo yokuqalisa kwe-injini, i-starter kufuneka yazise i-344 ~ 400Ah yombane kwibhetri. Ke ngoko, ukuthintela ibhetri kwi-over-current okanye umonakalo, ixesha lokuqala akufuneki lidlule kwi-5s. Ebusika, kulula ukuqala nzima ukuqala. Amaxesha okuqala amaninzi akufuneki abe made kakhulu, kwaye amaxesha afanelekileyo kufuneka ashiywe kwisiqalo ngasinye.
Ukuhlolwa kokungaphumeleli: I-starter ihlala isilela kunye neziganeko ezingenakujikeleza okanye zijikeleze kancinci. Kule meko, jonga ezi zinto zilandelayo:
1. Ibhetri ayinawo umbane okanye umbane awunamandla, ke ngoko i-starter ayinakho ukujikeleza okanye ukujikeleza kancinci.
2. Umsonto wokuqalisa awukhululekanga okanye ucinyiwe, kwaye iswitshi okanye iswitschption switch iyasilela.
3. Ibrashi igugile okanye umphezulu webrashi awuchanekanga, kwaye intwasahlobo ibuthathaka, ikhokelela kunxibelelwano olubi lomlungisi.
4. Ikhoyili yovuyo okanye i-armature coil is short-circuited or disconnected.
5. Isilungisi siyaphoswa kwaye iphepha le-mica liyaphuma, libangela unxibelelwano olubi phakathi kwebrashi kunye nomlungisi kwakhona.